कपालमा कलर गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरूमा ध्यान दिनुस्… – ramechhapkhabar.com
कपालमा कलर गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरूमा ध्यान दिनुस्…
आजभोलि कपालमा कलर गर्नु सामान्य कुरा हाे । किशोर अवस्थादेखि सबै उमेर समुहका महिला तथा पुरुष दुवैले कपालमा कलर गर्ने गर्छन् । कपाल कलर गर्दा सुन्दर र केहि उमेर कम देखिने हुनाले पनि हिजोआज कपालमा कलर गर्नेको संख्या बढ्न थालेकाे छ । तर कपाल कलर गर्दा ध्यान दिनु अतिआवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले कपाल कलर गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केहि कुराहरु निम्न रहेका छन् ।
-कुन ब्राण्डको कलर गर्ने । -कलर आफूलाई सुट गर्छ कि गर्दैन । -कलर गर्दा जहिले पनि कलर विषेशज्ञको निगरानीमा गर्ने । -कलर गरेपछि कपालमा हेयर ग्लास लगाउने जसले गर्दा कपालको रंग धेरै दिनसम्म बस्छ ।-कपाल हल्का चिसो वा मनतातो पानीले धुने । -कपाल कलर गरेपछि छिटो छिटो धुनु हुँदैन । -कलर प्रोटेक्टिभ स्याम्पुको प्रयोग गर्ने । यसको प्रयोग गर्नाले कपालमा कलर लामो समय रहन्छ । -कपाल कलर गरिसकेपछि आफैले ओइल मसाज गर्ने ।
यस्ता छन् चाया हटाउने घरेलु तरिका
जाडो मौसममा अधिकांश मानिसको टाउकोमा चायाको समस्या हुन्छ । विशेषगरी जाडो मौसममा तालु रुखो हुँदा चाया पर्ने समस्या चाँडो देखिन्छ ।
यदि बढी चाया पर्ने समस्या रहेमा अरू मानिसका अगाडि लाजमर्दो अवस्था सिर्जना हुने, आत्मविश्वास कम हुने र आत्मबल कमजोर हुने जस्ता समस्याबाट चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
दिनहुँ श्याम्पू परिवर्तन गर्नु र केमिकल युक्त श्याम्पूको प्रयोगले टाउकोको त्वचामा असर पर्छ, जसको कारणले चायाको समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
टाउकोमा तेल रहँदा टाउकोको त्वचा चिल्लो हुन्छ, जसको कारणले कपालमा फोहोर जम्मा हुन्छ र यहीँ फोहोरले नै चायाको समस्या निम्त्याउँछ ।
यो फोहोरको कारणले कपाल झर्न शुरू हुन्छ । यति मात्र नभई अस्वस्थकर आहारको कारणले पनि कपाल ओयली हुन्छ, जसको कारणले कपालमा चायाको समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
-एक चम्चा माटोमा गोलभेडाको पेस्ट मिलाएर पेष्ट बनाई कपालमा लगाएर १५÷२० मिनेट छोडेर कपाल धोएमा कपालमा रहेको चाया कम हुन्छ ।-अमिलो दहीमा थोरै पानी मिसाएर कपालमा लगाएर ३० मिनेट जति राखेर नुहाउनुस कपालको चाया घट्छ । -रहरको दाललाई रातभर पानीमा भिजाएर बिहान उठ्ने बितिक्कै पिनेर कपालमा लगाउनुस र आधा घन्टा जति छाडेर नुहाउनुस कपालमा रहेको चाया जान्छ ।
-करिव ५ वटा कागती काटेर २ लीटर पानीमा उमाल्नुस र चिसो भइसकेपछि कपाल धुनुस तपाईको कपालमा रहेको चाया छिटै हटेर जान्छ । -दाना मेथीलाइ रातभर ढड्याएर राख्नुस र बिहान उठेर त्यसको पेष्ट बनाएर कपालमा लगाई आधा घन्टा जति कुरेर पखाल्नुस कपालको चाया कम हुन्छ । -सरस्युको तेल र कागतीको रस मिलाएर कपालमा लगाई मालिस गर्नुस । एक दिन बिराएर यसो गर्न सकेमा तपाइको टाउकोबाट चाया पूर्णरुपले हराएर जान्छ ।